MEO Class I ,MEO Class I+II , MEO Class III သင်တန်းသား.များ..သိသာရန်.. ~ MSU Portal
MEO Class I ,MEO Class I+II , MEO Class III သင်တန်းသား.များ..သိသာရန်..
11/26/2013 10:18:00 PM MYANMAR SEAMEN UNION No comments
ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဘက်ဆိုင်ရာ..ပညာရေးစနစ်သစ်. စာမေးပွဲ...ပုံစံကို. .ပြောပြလိုပါသည်..။
Pretest Exam စစ်ဆေးရပါမည်..။
Pretest Exam တွင်..စစ်ဆေးမည့်..မေးခွန်းများကို..သက်ဆိုင်ရာ.. သင်တန်းကျောင်းများမှ..ဘာသာရပ်အသီးသီးအတွက်ပြုစုပြီးနောက်.
မေးခွန်းအဆင့်ရှိလျှင်.၊ Question Weight ညီလျှင်...ခွင့်ပြုပါမည်..။
အဆင့်နှိမ့်သည်..။ သို့မဟုတ်..Question Weight ချိန်ဆမှု..မညီဟု..ထင်လျှင်..
Pretest Questions များကို..ပြန်လည်.ပြုစု.တင်ပြရပါမည်..။
အဆိုပါ..တင်ပြထားသော..Pretest Question Set များထဲမှ..တစ်စုံကို..
Pretest စစ်ဆေးမည့်နေ့..စာမေးပွဲဖြေရန် ၁၅ မိနစ်ခန့်အလိုတွင်..မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး
Pretest Exam ကို..DMA တာဝန်ရှိသူ..တစ်ဦးမှ..Monitor လုပ်နေပါမည်..။
Pretest Exam Answer Paper များကို.သင်တန်းကျောင်းမှ.. .စစ်ဆေး..အမှတ်ပေးပြီးနောက်
Counter Check စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက်..DMA သို့..တင်ပြရပါမည်..။
အတည်ပြုချက်ရ..ပြီးမှ..Pretest Exam အောင်စာရင်း..ထုတ်ပြန်ပါမည်..။
Pretest Exam တွင်..ကျရှံးဘာသာရပ်များရှိပါက..၊
Pretest Exam တွင်ဘာသာရပ်အားလုံးကို. အောင်မြင်ပြီးသူများသာ...
BoE (Board of Exam) မှ ကျင်းပသည့်..CoC (Certificate of Competency) စာမေးပွဲများ..ကို..ဖြေဆိုခွင့်ရရှိမည်...ဖြစ်ပါသည်..။
Pretest Exam ကို..ပေါ့ပေါ့ဆဆ..ဖြေဆိုခြင်းမပြုကြရန်..အသိပေး.လိုပါသည်..။